Cayman Islands dia mandefa ny programa Global Citizen Concierge
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao ao amin'ny Nosy Cayman » Cayman Islands dia mandefa ny programa Global Citizen Concierge
Na dia mikatona amin'ny fifamoivoizana amin'ny fifamoivoizana sy ny fivezivezena an-tsambo aza ny sisintany mankany amin'ny Nosy Cayman amin'izao fotoana izao, ny Nosy Cayman dia faly manambara amin'ny fomba ofisialy ny famoahana ny Programme Concierge an'ny olom-pirenena eran-tany (GCCP), hetsika fizahan-tany natao ho an'ny mpifindrafindra nomerika mitady hanararaotra ny fahalalahana omen'ny asa lavitra. Satria orinasa an'arivony no misafidy ny hitazona ny asany any an-trano ho an'ny ho avy mialoha, ny matihanina sy ny fianakaviana afaka manatsara ny biraon'ny tranony amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny hipetraka sy hiasa lavitra any amin'ny Nosy Cayman mandritry ny roa taona amin'ny alàlan'ny fahazoana mari-pahaizana momba ny Citizen Global. . Nalefa tamin'ny 21 Oktobra 2020 tamin'ny fomba ofisialy ary notohanan'ny Departemantan'ny fizahan-tany Cayman Islands (CIDOT) miaraka amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany sy ny sampana governemanta, ny GCCP dia hanome ny fenitra avo lenta ho an'ny serivisy manokana ho an'ireo vahiny maharitra sy olom-pirenena manerantany avy amin'ny fahatongavana hiainga.
"Global Citizen Concierge dia manome fotoana mety indrindra ho an'ireo mpiasa lavitra mba hiaina ny fiainany amin'ny nofinofiny eny amoron'ny morontsiraka sy eo amin'ny vahoaka Caymankind," hoy i Hon. Ny praiminisitra lefitra ary ny minisitry ny fizahantany, Moses Kirkconnell. “Nahomby ny governemanta tamin'ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana manerantany ary nanjary fialofana azo antoka any Karaiba izahay. Ankehitriny mihoatra ny taloha, ny orinasa dia mandray ny fahafaha-miovaova amin'ny fisiana nomerika, miaraka amina mpiasa marobe mitady ny fiovan'ny toerana sy ny fomba fiainana. Ny mpiasa lavitra dia afaka mandany hatramin'ny roa taona monina sy miasa any amin'ny Nosy Cayman - manome aina ny fandaharam-potoanan'izy ireo sivy ka hatramin'ny dimy miaraka amin'ny Caymankindness ary mampiakatra ny fifandanjan'izy ireo amin'ny fiainana miaraka amin'ny masoandro, fasika, ranomasina ary fiarovana any Cayman. "
Manerana an'izao tontolo izao, ny orinasa lehibe dia nandray ny politikam-piasan'ny olona miovaova, mamela ny mpiasan'izy ireo hiasa amin'izay toerana mety hamokarany. Miaraka amin'ny fotodrafitrasa eran'izao tontolo izao sy ny kojakoja voalohany, ny Nosy Cayman no toerana mety indrindra ho an'ireo mpifindrafindra nomerika. Ny olom-pirenena eran-tany dia afaka manomboka ny androny amin'ny fitsangatsangana amoron-dranomasina Seven Mile, snorkel miaraka amina ahidrano ao anaty rano madio any Karaiba mandritra ny sakafo atoandro ary ho "trano fisakafoanana" miaraka amin'ny fanomezana avy amin'ny renivohitra Culinary renivohitra tsara indrindra any Karaiba. Tsy lazaina intsony, ny mpiasa lavitra dia manana fotoana tsy manam-paharoa hiroboka tanteraka amin'ny zava-mahatalanjona amin'ny fiainana nosy any amin'ny Nosy Cayman.
Ny mpitsangatsangana liana amin'ny fahazoana mari-pahaizana momba ny zom-pirenena eran-tany dia asaina hisoratra anarana amin'ny Internet. Ny mason-tsivana ao amin'ny GCCP dia mamaritra izao manaraka izao:
Ny mpangataka dia tsy maintsy manome taratasy mampiseho porofon'ny asa miaraka amin'ny orinasa ivelan'ny Nosy Cayman milaza ny toerana misy azy sy ny karama isan-taona. Ireto ny fepetra takiana amin'ny karama farany ambany:
Ny mpangataka tsirairay dia tsy maintsy mahazo fidiram-bola farafahakeliny US $ 100,000 ho an'ny tokantrano tokana.
Ny mpangataka miaraka amin'ny vady / mpiara-miombon'antoka miaraka dia tsy maintsy mahazo vola ambany indrindra $ 150,000 amin'ny tokantrano olona roa.
Ny mpangataka miaraka amin'ny vady / mpiara-miombon'antoka ary zanaka miankina na fiankinan-doha * dia tsy maintsy mahazo vola ambany indrindra $ 180,000.
Ny mpangataka amin'ny zanaka miankina na zanaka dia tsy maintsy mahazo fidiram-bola farafahakeliny US $ 180,000.
Sarin'ny pejin'ny sary pasipaoro sy visa mety, raha ilaina amin'ny mpangataka rehetra amin'ny antoko. Tsindrio azafady Eto hahitana ny mombamomba ny visa efa nohavaozina indrindra.
Fanovozan-kevitra amin'ny banky notarized.
Porofon'ny fiantohana ara-pahasalamana ankehitriny ho an'ireo mpangataka rehetra ao amin'ny antoko misy anao.
Ny mpangataka sy ny miankina amin'ny olon-dehibe dia tsy maintsy manome taratasy fahazoan-dàlana / firaketana an-tsoratra na antontan-taratasy mitovy amin'izany mifototra amin'ny firenena niaviany.
* Ny fiankinan-doha dia raisina ho vady, fofombadin'olona / fofombadiny, mpiara-miombon'antoka, ray aman-dreny, raibe sy renibe, zoky, na zanaka hatramin'ny fidirana amin'ny fampianarana ambaratonga ambony. Ny ankizy dia tsy maintsy voasoratra anarana amin'ny sekoly tsy miankina an-toerana na misoratra anarana amin'ny homeschooling.
Vola fanamarinana ny olom-pirenena eran-tany
Ny saram-pankatoavana ny zom-pirenena manerantany dia hatramin'ny antoko olona 2: US $ 1,469 isan-taona
Vola fanamarinana ny olom-pirenena eran-tany isaky ny miankina: US $ 500 isaky ny miankina, isan-taona
Vola fanodinana carte de crédit: 7% amin'ny saran'ny fangatahana
Hawaiian Airlines dia manohy ny sidina Boston sy New York
18 minitra lasa izay